रोटाले सताउला बालबालिकालाई | Hamro Doctor News
रोटाले सताउला बालबालिकालाई
By डा. गणेशकुमार राई (वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ)
नेपालका बालबालिकामा देखिने संक्रमणमध्ये निमोनियापछि ठूलो संक्रमणका रूपमा झाडापखाला पर्छ । त्यसमा पनि जाडोको समय र गर्मी मौषम सुरु हुँदाका बखत देखिने रोटा भाइरसका कारण हुने संक्रमण बढी देखिन्छ । बालबालिकामा देखिने झाडापखालामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमणको कारण सोही भाइरस हो । गर्मी महिनामा पनि रोटा भाइरसका कारण हुने झाडापखाला देखिन्छ, तर यो अत्यन्तै न्यून हुन्छ । जाडो सुरु भइसकेको अवस्थामा यो भाइरसबाट हुने संक्रमण बढेको पाइन्छ ।
झाडापखालाले नै बालबालिकाको मृत्यु भने हुँदैन । तर, यसले गराउने जलवियोजनले गर्दा बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्छ । बारम्बार पखाला लाग्दा बालबालिकाको शरीरमा आवश्यक पर्ने पानीको मात्रा घट्न जान्छ । लगातारको पानीसहितको दिसा र बान्ताले गर्दा उनीहरूलाई जलवियोजन हुन्छ ।
धेरै तिर्खा लाग्छ ।
छटपटी बढ्छ ।
हेर्दा आँखा गढेको देखिन्छ ।
पेटको छाला तानेर हेर्दा हतपत नफर्किने हुन्छ ।
कडा जलवियोजन भएमा
बालबालिकाले झोल पदार्थ पिउन सक्दैन ।
खानेकुरा खान सक्दैन ।
सानो बच्चा छ भने आमाको दूध तान्न सक्दैन ।
बच्चा बेहोस हुन सक्छ ।
झाडापखालाको मुख्य उपचार जलवियोजनको उपचार नै हो ।
जति जलवियोजन भएर शरीरबाट पानी बाहिर जान्छ, त्यति नै झोल पदार्थ खुवाउने गर्नुपर्छ ।
६ महिनासम्मको बच्चालाई सादा पानी र जीवनजलसँगै स्तनपान लगातार गराउनुपर्छ ।
६ महिनामाथिको बालबालिका छ भने जीवनजलको साथसाथै आमाको दूध, दालको रस, गेडागुडी तरकारीको रस खुवाउने, ताजा फलफूलको रस र केरा खुवाउनुपर्छ ।
थोरै मात्रामा जाउलोसँग दही वा मोही पनि झाडापखाला लागेका वेला राम्रो हुन्छ ।
झोलपदार्थसँगै जिंक चक्की खुवाउनु राम्रो हुन्छ । यसले कहिलेकाहीं उल्टी गराउन सक्छ, तर आफैं ठीक हुन्छ ।
कडा जलवियोजन भएको अवस्थामा तत्काल स्वास्थ्य संस्था लानुपर्छ ।
प्रायः झाडापखाला ३ दिनदेखि ७ दिनसम्ममा आफैं ठीक हुन्छ । सोभन्दा लामो समय लागेमा स्वास्थ्य संस्था लैजानुपर्छ ।
जाडोमा हुने झाडापखालामा रोटा भाइरसविरुद्धको खोप दिनु राम्रो हुन्छ ।
सधैं ताजा र सफा खानेकुरा मात्र खुवाउनुपर्छ ।
शुद्ध पानी मात्र पिउन दिने ।
घरवरपरको वातावरण र चर्पी सफा राख्ने ।
केही खानुअघि र खाइसकेपछि अनिवार्य साबुनपानीले राम्ररी हात धुने ।
बाहिर गएर आएपछि सीधै बच्चालाई नसमाउने । समाउनुअघि हातखुट्टा राम्ररी धुने ।
दुई हप्ताभन्दा कम समय झाडापखाला लागेको छ भने एन्टीबायोटिक खुवाउनुहुँदैन । खुवाउनुपरेमा चिकित्सकको सल्लाह अनिवार्य लिनुपर्छ ।
दुई हप्ताभन्दा लामो समय झाडापखाला लागेमा त्यसलाई दीर्घ झाडापखाला(क्रोनिक डायरिया) भनिन्छ । जसको उपचार फरक हुन्छ । त्यसमा पहिले कारण पत्ता लगाउनुपर्छ जसका लागि स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ ।
केरामा पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ । झाडापखाला भएको बच्चामा यो तत्व कम हुन्छ । त्यसले पेट फुलाउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न फलफूल आवश्यक हुन्छ ।
झाडापखाला लागेका वेला बच्चाले कतिपटक पिसाब गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ । सो वेला कम्तीमा एक दिनमा ७ पटक पिसाब फेरेको हुनुपर्छ । झोलपदार्थ कम खाँदा कम पिसाब हुने र त्यसले मिर्गाैलामा असर गर्ने हुन्छ ।
झाडापखालाको उपचार गर्दा एन्टीबायोटिक खान आवश्यक छैन । त्यस्तो औषधि खुवाएमा बच्चाको रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भई झनै समस्या हुन सक्छ ।
दिसामा रगत गएको पाइएमा आउँ हुन सक्छ यस्तो वेला तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा लगी दिसा जाँच गराउनुपर्छ ।
समय नपुगी जन्मिएका बच्चा, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको बच्चा, कुपोषण भएको बच्चालाई दीर्घ झाडापखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
#डा. गणेशकुमार राई
Last modified on 2018-12-27 16:08:57